SONSAF | Halkan ka gal
Halkaan ayaad timid: Home » SONSAF » Halkan ka gal
Halkan ka gal
Digniin: Qorista Firfircoon Waa la curyaamiyay
Waanu ka xunahay, ma aqrin karaysid foomka galida sababtoo ah Qoraalka Java Waa Laga Curyaamiyay ilmariyahaaga.
Waa in aad awood siiso Qorista Firfircoon si ay kuugu suurta gasho inaad buuxiso foomka. Fadlan awood sii Qoraalka Java boggana cusboonaysii si aad u sii socoto.
Sida loo Awood siiyo Qoraalka Java ee kujira Ilmariyahaaga
Foomka hoose buuxi si aad u gashid meesha loogu tala galay xubnaha.
Qeybtaan waxaa loogu tala galay xubnaha SONSAF oo kaliya.
Hadii aad tahay xubin ka tirsan SONSAF oo aadan lahayn bog adiga kuu gaar ah, fadlan is diiwaan gali si aad ugu soo biirto meesha xubnaha.
In la ansixiyo isdiiwaan galintaada waxay qaadan kartaa maalmo dhowr ah. Isdiiwaan gali
Xusuusnoow: In dhammaan meelaha oo dhan loo baahan yahay
Cinwaanka E mailka:
Ma haboona markii kombuyuutarku ka dhexeeyo dad badan.